သမ္မတ အိုဘားမား မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းကို တရားဝင် မိန့်ခွန်းပြောမည် | ဧရာဝတီ
သာလွန်ဇောင်းထက်| November 14, 2012 | Hits:10,524
13 | | သမ္မတ အိုဘားမား တည်းခိုမည် ဆိုသော ရန်ကုန်မြို့ရှိ ချတ်ထရီယံ ဟိုတယ်တွင် နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်လိုက်သည့်ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည့် အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမားသည် ရန်ကုန်မြို့တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မြန်မာအသိုင်းအ၀န်းသို့ တရားဝင် မိန့်ခွန်းပြောကြားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံးက သတင်းမီဒီယာများသို့ သမ္မတ အိုဘားမား ခရီးစဉ်အတွက် သတင်းရယူလိုသော မီဒီယာများ စာရင်းပေးသွင်းရန် အကြောင်းကြားသောစာတွင် သမ္မတ အိုဘားမားသည် ရန်ကုန်မြို့တွင်ရှိနေစဉ် မြန်မာ အသိုင်းအ၀န်းသို့ တရားဝင် မိန့်ခွန်းပြောကြားမည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းမိန့်ခွန်းပြောကြားမည့် အစီအစဉ်သို့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများ၊ လူမှုရေး လုပ်ကိုင်နေသူများ အပါအ၀င် ရွေးချယ် ဖိတ်ကြားထားသော မြန်မာအသိုင်းအ၀န်း တက်ရောက်ကြမည် ဖြစ်သော်လည်း မိန့်ခွန်းပြောကြားမည့် နေရာ၊ အချိန်နှင့် အစီအစဉ်အသေးစိတ်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးပေ။
နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာမည့် သမ္မတ အိုဘားမားသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း နေအိမ်၌ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိမ်ခြံဝန်း အတွင်းသို့ လုံခြုံရေးအရ မြန်မာနိုင်ငံ အခြေစိုက် ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းမီဒီယာတချို့ကိုသာ သတင်းရယူခွင့် ပြုနိုင်မည် ဟုသိရသည်။
လတ်တလော သိရှိထားသော သတင်းအချက်အလက် များအရ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်အသင်းမှ သတင်းဌာန ၃ ခု၊ ပြည်တွင်းအခြေစိုက် သတင်းဂျာနယ် ၃ ခုတို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်တည်ရှိရာ အင်းလျားကန်စောင်း၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဆီဒိုနားဟိုတယ် တို့တွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှ လုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာအစိုးရ အာဏာပိုင်များ ပူးပေါင်း၍ အထူး လုံခြုံရေးကင်းများ ချထားကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ၏ တာဝန်ရှိသူများက ဆိုသည်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ လေး၊ ငါးရက် လောက်ကတည်းက အင်းလျားကန်၊ ဆီဒိုနားနဲ့ ကန်ပေါင်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း တလျှောက်မှာ အမေရိကန် လုံခြုံရေးနဲ့ မြန်မာအစိုးရ လုံခြုံရေးတွေ ပူးတွဲပြီး ကင်းချ ဆောင်ရွက်နေကြတယ်” ဟု NLD လူငယ်တဦးက
ခရီးစဉ်အတွင်း သမ္မတ အိုဘားမားက ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံရန် ရှိကြောင်း အိမ်ဖြူတော်က ကြေညာထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ တိုးတက်မှုရှိစေရေးအတွက် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက အားပေးထောက်ခံသွားရန် ယခု ခရီးစဉ်ကို စီမံခြင်းဖြစ်ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်ကြေညာချက်က ဆိုသည်။
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားနှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ တွေ့ဆုံမည့် အစီအစဉ်ကိုမူ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေးက ဧရာဝတီသို့ ရှင်းပြသည်။
သမ္မတအိုဘားမား တည်းခိုမည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်နေသော ချက်ထရီယံ ဟိုတယ်တွင် လုံခြုံရေး အထူး တင်းကျပ်ထားပြီး တည်းခိုသူများကို လုံးဝ လက်မခံတော့ကြောင်း၊ ယခင် ရက်ရှည်တည်းခိုနေသူများ၊ ရုံးခန်း ဖွင့်ထားသူများ ကိုလည်း အိုဘားမား မလာမီ ရက်အတန်ကြာ ကြိုတင်၍ ထွက်ခွာစေခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့သည့် ၂၂ နှစ်ကြာ သံတမန် ဆက်ဆံရေး အဆင့်နှိမ့်ချထားရာမှ ယခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ကာ သံအမတ်ကြီး အဆင့်တိုးမြှင့်၍ ၂ နိုင်ငံ သံတမန် ဆက်ဆံရေး အပြန်အလှန် ပုံမှန် ပြန်ရောက်လာပြီး အမေရိကန်က စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုများကိုလည်း ဖြေလျှော့ ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည့် အမေရိကန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များကိုလည်း ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။
အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း ဆွေးနွေးဖက်များနှင့် ဆွေးနွေးမည့် အကြောင်းအရာများမှာ ကျန်ရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေး၊ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အရှိန်မြှင့် လုပ်ဆောင်ရေး၊ တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လွှတ်တော်များက အခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းမကျမှုများကို ဖယ်ရှား၊ ပယ်ဖျက်၊ ပြုပြင် ပြင်ဆင်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး စသည့်ကိစ္စများ ဖြစ်ကြောင်း အိမ်ဖြူတော် ကြေညာချက်က ဆိုထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အောင်မြင်မှု သို့မဟုတ် ကျရှုံးမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံသား တဦးချင်းစီ၏ အားထုတ်မှု အပေါ် မူတည်ကြောင်း အဆိုပါ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
သမ္မတ အိုဘားမား၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်း ပြည်ပ မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူများကလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စရပ်များ၌ သိသာမြင်သာရှိသည့် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုများ ရသင့်ကြောင်း ပြောဆိုနေကြသည်။
သတ္တိမွေးကြရန် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် အိုဘားမားတိုက်တွန်း
မျှော်လင့်ချက် ခွန်အားကို မြန်မာပြည်တွင် မြင်ခဲ့ကြောင်း သမ္မတ အိုဘားမား ပြော
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Lay hone November 15, 2012 - 1:06 am	Myanmar will be welcome to US president for his historic visiting. In this time which position of Myanmar is that between US and China , the great two super power who are hand in hand with smile to see mutually but the other side they establish the stronghold military power.who will be destroy in Myanmar unity? It is my only view that China might make to breat off in Myanmar more than US because of its border share is long and she has uphold Kachin rebel and UWSA,notorious drug warlord as puppet of chinese.In addition some rebel connected and tried to china for supporting.US is establishing with Myanmaragoog relation that is comprehensive strategy to predominate China.Myanmar has tottered with internal and domestic issue but Kachin and UWSA is prevalent in region.
All people know why these Kachin’s violence has started ,but we don’t know who Kachin has been supported arms and ammunitions.
Reply	Thursday's sun November 15, 2012 - 6:42 am	မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အောင်မြင်မှု သို့မဟုတ် ကျရှုံးမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံသား တဦးချင်းစီ၏ အားထုတ်မှု အပေါ် မူတည်ကြောင်း အဆိုပါ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်